knowledge share for Everyone
ကျွန်ုပ်၏ ဦးနှောက်ကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မဆို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အလို.ငှာ မျှဝေပါ၏။ အလိုရှိက ယူငင်အသုံးပြုကြကုန်လော.
ဒီ Blog လေးကိုစရေးတော့ လူတိုင်း Blog တွေလုပ်ကြတဲ့ အချိန်မှာ IT field ထဲမှာနေနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ စရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရေးရင်း ရေးရင်းနဲ့ လူတွေဖတ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေများများလာတယ်။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ ကြောင်းအရာထက် ဘာအကြောင်းရေးရင်လူတွေ စိတ်ဝင်စားကြမလဲ ဆိုတာကိုဘဲ အမြဲ အလေးပေး စဉ်းစားလာမိတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ကိုဘာသာ ပိတ်ပင်မှန်းမသိ ပိတ်ပင် မိလာတယ်။ လူဖြစ်တဲ့ အတွက် အသိအမှတ်ပြုခံမှုကို တက်မက်လိုချင်တဲ့ စိတ်ရှိခဲ့တယ်။ အသိအမှတ်ပြု မခံရခင် တုံးကတော့ သာမန်တက်မက်မှု အဆင့်ဘဲရှိသေးတယ်။ နည်းနည်းအသိအမှတ်ပြု ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာမှ အသိအမှတ်ပြုခံရမှုတွေ နည်းသွားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် မရှိတော့ဘူး ဆိုရင် ပိုပိုပြီးတော့ မခံမရက်နိုင်နဲ့ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
အသိအမှတ်ပြုခံရမှုနောက်ကို လိုက်ရင် ကို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိလာတယ်။ အသိအမှတ်ပြုခံရမှုတွေနဲ့ ထင်ပေါ်မှုနောက်ကို လိုက်မလား ? လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ရှင်သန်နေထိုင်မလား ? တစ်ခုကိုလိုချင်ရင် တစ်ခုကိုတော့စွန့်လွှတ် ရမှာပေါ့။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ နှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်းရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ထားပြီးမရခဲ့ရင် အတိုင်းထက်အလွန် ပိုပြီး ခံစားရ အုံးမှာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ လွတ်လပ်မှုကို တခြားမျှော်လင့် ချက် ကင်းစွာနဲ့ ရွေးချယ်လိုက်ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ဒီ Blog လေးမှာ အခုအချိန်ကစပြီးတော့ ရေးချင်တဲ့ အချိန်မှာ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ရေးမယ်။ ဒီ Blog ကို ဖတ်တဲ့လူတွေ ဘာမှမျှော်လင့် ပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ပါတယ်။ :)
ကျွန်တော် ရေးချင်တဲ့ အချိန်မှာ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို နှောင်ဖွဲ့မှု ကင်းစွာနဲ့ပဲ ဆက်လက် ရှင်သန်စေပါတော့မယ်။
အပြည့်အစုံ ဆက်ဖတ်မယ် ...
Posted by မျိုးသန်. at 10:36 AM2comments
Posted by မျိုးသန်. at 12:15 AM2comments
cyclone nargis in myanmar (yangon) 54
technorati myanmar burma nargis cyclone yangoncyclone nargisyangon cyclone myanmar cyclone
Posted by မျိုးသန်. at 12:01 PM0comments
cyclone nargis in myanmar (yangon) 53
Posted by မျိုးသန်. at 12:00 PM0comments
cyclone nargis in myanmar (yangon) 52
Posted by မျိုးသန်. at 11:57 AM0comments
cyclone nargis in myanmar (yangon) 51
Posted by မျိုးသန်. at 11:55 AM0comments
cyclone nargis in myanmar (yangon) 50
Posted by မျိုးသန်. at 11:53 AM0comments
ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကြောင့် ဘ၀များစွာ ပျက်ခဲ့ရပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းဝန်းပြီး ပြန်လည် ထူထောင်ကြပါစို့
ဤ Blog ကိုရေးသားသူမှာ ICT နယ်ပယ်၏ ကျဉ်းမြောင်းသော နေရာလေး တစ်ခုတွင် အသိပညာ ရှာဖွေ မျှဝေသူ တစ်ဦးအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အထူးပြု Subject မှာ Network ဖြစ်ပါသည်။
ဒီ Blog ကို ကြည့်နေတဲ့ concurrent user
ပြန်လည် ဝေဖန် ပေးကြပါ
ကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှ September (1) May (55) February (10) December (2) October (5) September (14)